Iyatholakala iWireshark 2.2.3 | Kusuka kuLinux
Sifunda ngenjabulo ku I-Softpedia manje etholakalela ukulanda I-Wireshark 2.2.3, okuyinguqulo yesondlo yaleli thuluzi futhi elayishwe ukulungiswa kwezimbungulu ezingaphezu kwe-19 nokuvuselelwa kwamaphrothokholi ahlukahlukene asetshenzisiwe.
1 Kuyini iWireshark?
2 Izici zeWireshark 2.2.3
3 Ungayilanda kanjani iWireshark 2.2.3?
I-Wireshark ithuluzi elisebenza njengefayela le- i-network protocol analyzer, evumela ukuthwebula nokuhlaziya ngesikhathi sangempela, ngendlela yokusebenzisana, ithrafikhi edlula kunethiwekhi. Ithuluzi elithandwa kakhulu lolu hlobo. Isebenza ku-Windows, Mac, Linux naku-UNIX. Ochwepheshe ku- ukuphepha, ochwepheshe kumanethiwekhi nabafundisi bayisebenzisa njalo. Kuyisoftware yamahhala, ngaphansi kwe-GNU GPL 2.
Ngaleli thuluzi sizokwazi ukuhlaziya wonke amaphakethe wedatha angena futhi ashiye noma iyiphi i-interface yethu yenethiwekhi (amakhadi we-Ethernet noma we-Wi-Fi). Ungabona lolu lwazi ngesikhathi sangempela, futhi lungahlungwa nangesikhathi sangempela. Itholakala ezinqolobaneni zezincwadi ezithandwa kakhulu.
Izici zeWireshark 2.2.3
Ukuthuthuka kokuqina, ukuthembeka nokuvikeleka kwesicelo.
Kulungiswe izimbungulu zohlelo lokusebenza ezingaphezu kwezingu-19.
Le mikhombandlela elandelayo ibuyekeziwe: BGP, BOOTP / DHCP, BTLE, DICOM, DOF, Echo, GTP, ICMP, Radiotap, RLC, RPC over RDMA, RTCP, SMB, TCP, UFTP4 and VXLAN.
Ungayilanda kanjani iWireshark 2.2.3?
Uhlobo lwe I-Wireshark 2.2.3 singayilanda kusuka ku- lapha. Ngokufanayo, emahoreni ambalwa alandelayo ama-distros amaningi azobuyekeza amaphakheji ahambisanayo kubaphathi bawo.
Akuyona inguqulo ephuthumayo, ngakho-ke singalinda ngokuphepha ukuthi itholakale ukuze ivuselelwe kusuka kumphathi ozenzakalelayo we-distro yethu esiyithandayo.
Ungafunda inothi lokukhishwa laphaSithemba ukuthi uyayijabulela le nkundla esize abangaphezu koyedwa ukuqapha amanethiwekhi abo. Kuyafaneleka futhi ukuncoma ukuthi silisebenzise ngokusemthethweni leli thuluzi, ngoba kuyaziwa ukuthi abantu abaningana balisebenzisela ukuhlola imininingwane eyimfihlo yabasebenzisi bamanethiwekhi omphakathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Iyatholakala iWireshark 2.2.3
Ukuhlola i-Clouding.io, i-exponent enhle kakhulu yama-Cloud Servers eSpain